Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Oselula ngoku ulwa nengxaki yemozulu eMilan
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iintlanganiso • iindaba • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Iprofayile kaFederica Gasbarro kaFacebook apho abonakaliswa noGreta Thunberg. KwakungoSeptemba 2019-bobabini babeseNew York kwindibano yokuqala yolutsha ye-UN kwimozulu.
UFederica Gasbarro, oneminyaka engama-26, noDaniele Guadagnolo, oneminyaka engama-28, baya kuba ngabameli ababini base-Italiya kwingqungquthela yoLutsha4Climate: “Driving Ambition,” ingqungquthela elandelayo yabantu abatsha yokulwa utshintsho lwemozulu.
Intlanganiso ivula apho i-Itali iya kuba yinto ekugxilwe kuyo kwingxoxo-mpikiswano kunye nephulo lokukhusela okusingqongileyo.
Malunga ne-400 phantsi kwe-30s-2 kwilizwe ngalinye lamazwe ali-197 angamalungu eNgqungquthela yeZizwe eziManyeneyo malunga neTshintsho lwemozulu (i-UNFCCC) - aza kudibana eMilan, eMiCo Congress Centre, ukusukela ngomhla wama-28 ukuya kowama-30 ukuya kowama-2021.
Amantombazana namakhwenkwe asele ekwiingcali okanye ekufundeni iindlela zokusingqongileyo ziya kuthatha inxaxheba.
“Lixesha lokuba,” utshilo uMphathiswa wezoQoqsho kwezeNdalo, uRoberto Cingolani, “apho abantu abatsha abavela kuqhankqalazo bangena kanye kwisindululo. Ingxaki yemozulu ibandakanya ukomelezwa kwengxoxo yezizukulwana ngezizukulwana. EMilan, iya kuba lithuba apho siza kuzama ukuyenza ikhonkrithi. ”
Ingxoxo-mpikiswano iza kwahlulwa-hlulwa ibe ziindawo ezi-4, ngenjongo yokuphuhlisa izindululo zekhonkrithi: ukuzimisela kwimozulu, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukubandakanyeka kwabadlali abangekho phantsi kukarhulumente, kunye noluntu olunolwazi imingeni yemozulu. "Silindelwe kakhulu," utshilo uFederica Gasbarro, "Izindululo zethu zivela kwiphepha lemibuzo elidluliselwe phakathi kwabantu abancinci base-Italiya abazinikele kwindalo esingqongileyo. EMilan, sizokwabelana ngabo kunye nabathunywa bamanye amazwe ukuba bafumane uxwebhu olufanayo. ”
Phakathi kwabo bazakuthetha iza kuba ziinkokheli ezi-2 "zangoLwezihlanu zexesha elizayo" -UGreta Thunberg noVanessa Nakate. Ngale ntsasa nje, umbutho wase-Italiya ubuyele kumngcelele kwizixeko ezininzi, ubhengeza ugwayimbo olukhulu lwangoLwesihlanu, nge-1 ka-Okthobha, noGreta ngokwakhe kwisikwere eMilan ekhalazela ukungabikho kokubandakanyeka kukarhulumente.
Ukubuyela kwingqesho yoLutsha4Climate, uxwebhu lokugqibela luya kunikwa iinkokheli ezifika eMilan, kwakhona eMiCo, kwingqungquthela ye-Pre-COP26. Le yokugqibela izakubanjwa ukusuka nge-30 kaSeptemba ukuya kwi-2 ka-Okthobha kwaye izakukhatywa nguMphathiswa uCingolani phambi kweNtloko kaRhulumente, uSergio Mattarella; Inkulumbuso u-Mario Draghi; kunye ne-Nkulumbuso yase-Bhritane u-Boris Johnson.
Umsitho wangaphambi kweCOP26, ofana nolutsha4Isimo sezulu, wenzeka ngokujonga i-COP26, iNkomfa yeZizwe eziManyeneyo yokuTshintsha kweMozulu eGlasgow ukusuka nge-31 ka-Okthobha ukuya kweye-12 kaNovemba ngokusebenzisana ne-Itali. Kwiminyaka engama-3, i-UN ibihlanganisa phantse onke amazwe e- ingqungquthela yemozulu yehlabathi Ngexesha apho la mathuba kuthathwe amanyathelo abalulekileyo njengokutyikitywa kwesiVumelwano saseKyoto ngo-1997, kunye nesiVumelwano saseParis ngowama-2015. umzuzu obuthathaka kakhulu - emva kwehlobo apho izikhukula kunye nemililo zibonise ukungxamiseka kokudlula ngendlela engazange yenzeke ngaphambili. Zingaphezulu kwe-26 iinkokeli zehlabathi ezilindelwe eScotland, ezijoyine amashumi amawaka abathethathethwano, abameli bakarhulumente, amashishini kunye nabemi kangangeentsuku ezili-190 zothethathethwano.
I-COP nganye malunga notshintsho lwemozulu yandulelwa yintlanganiso yokulungiselela ebibanjwe kwinyanga ephelileyo, ngokuchanekileyo i-Pre-COP, edibanisa abaphathiswa bemozulu kunye namandla eqela elikhethiweyo lamazwe ukuba baxoxe ngemiba ethile yezopolitiko kuthethathethwano kunye nokwenza nzulu imiba ephambili Oko kuyakuqwalaselwa kwiNkomfa. Malunga namazwe angama-40-50 aya kuthatha inxaxheba kwi-Pre-COP eMilan kunye nabameli be-UNFCCC kunye noluntu.
Okwangoku, i-All4Climate iyaqhubeka, inkqubo esungulwe liSebe loTshintsho lwezeNdalo kunye ne-Connect4climate yeBhanki yeHlabathi, ngokuthatha inxaxheba koMmandla waseLombardia kunye noMasipala waseMilan. Iziganeko ezingaphezu kwe-500 zicwangcisiwe kuyo yonke i-Itali, eziququzelelwe enyakeni ziinkampani, imibutho, imibutho yoluntu kunye nabantu babucala ukwazisa ngemozulu. Phakathi kwamanyathelo aseMilan, nge-30 kaSeptemba eSan Siro Hippodrome, ikhonsathi yeMusic4Climate, eveliswe ngePianoB, iya kuziswa kwaye iya kufumaneka bukhoma kwi-livemusic.tv.